အဘိညာဉ်နှင့် ရဟန္တာ | မေတ္တာရိပ်
← မဂ်ဖိုလ်ရသင့်လျက် မရခြင်းအကြောင်း
ပရမတ် ၄ ပါး →
အဘိညာဉ်နှင့် ရဟန္တာ	Posted on November 2, 2009	by mettayate လောကုတ္တရာအဘိညာဉ်
အာသဝေါတရားလေးပါး (အာသ၀ – ယိုစီးခြင်း။ ဘ၀သံသရာမျိုးစုံမှာ ကျင်လည်အောင် လုပ်ပေးတတ်တဲ့ တရားပေါ့။) ကို ကုန်ခမ်းစေတဲ့ အဘိညာဉ်။
အ၀ိဇ္ဇာသ၀ – အမှန်ကိုမသိတဲ့ မောဟ။
လောကီအဘိညာဉ် (၅) မျိုး
၁) ဣဒ္ဓိဝိဓ အဘိညာဉ် – မြေလျှိုး၊ မိုးပျံ၊ ကိုယ်ပျောက်စတဲ့ အခြင်းအရာတွေကို ဖန်ဆင်းနိုင်တာ။
၂) ဒိဗ္ဗ သောတ အဘိညာဉ် (သဂြိုလ်ကျမ်း)
သောတဓါတုဝိသုဒ္ဓိဉာဏ် (ပဋိသမ္ဘိဒါမဂ် ပါဠိတော်) – ဘယ်လောက်ဝေးတဲ့နေရာက အသံကိုဖြစ်စေ ကြားနိုင်တယ်။
၃) ဒိဗ္ဗစက္ခု အဘိညာဉ် – နတ်မျက်စေ့ကဲ့သို့အရာဝတ္တုတစ်ခုခုကို ဘယ်လောက်ဝေးဝေး၊ ဘယ်လောက်သေးသေး၊ ဘယ်လောက်ဖုံးကွယ်၊ ဖုံးကွယ် မြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။
၄) ပရစိတ္တ၀ိဇာနာန အဘိညာဉ် – သူတစ်ပါးစိတ်မှာ ဖြစ်နေတာမှန်သမျှကို မိမိစိတ်နဲ့ ပိုင်းခြားပြီး သိနိုင်တာ။
၅) ပုဗ္ဗေ နိဝါသာနုဿတိ အဘိညာဉ် – ရှေးရှေးက ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘ၀တွေကိုပြန်ပြီးကြည့်နိုင်သိနိုင်တာ။
ပဋိသမ္ဘိဒါပတ္တ ရဟန္တာ – ရဟန္တာဖြစ်တာနဲ့ ပိဋကိတ်နှင့်တကွ ဂန္ထန္တရ၊ ဘာသန္တရ အကုန်တတ်ကျွမ်းသွားတာ။
ဆဠာဘိညရ ရဟန္တာ – အဘိညာဉ် ၆ ပါးရတဲ့ ရဟန္တာ။
တေ၀ိဇ္ဖပတ္တ ရဟန္တာ- ပုဗ္ဗေ နိဝါသာနုဿတိ၊ ဒိဗ္ဗစက္ခု အဘိညာဉ်၊နှင့် အာသ၀က္ခဉာဏ် ၃ ပါးကိုရတာ။
သုက္ခ၀ိပဿက ရဟန္တာ- အာသ၀က္ခဉာဏ်ရပြီး ကိလေသာအားလုံးကုန်သွားတာပဲရှိပါတယ်။ ဈာန်အဘိညာဉ်မှ ခြောက်သွေ့ခြင်း။ ဈာန်အဘိညာဉ်မရှိခြင်းပါ။
ယခုခေတ်တွင် ရဟန္တာတစ်ပါးသည် ပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစံတော်မူပြီးနောက် ရုပ်ကလာပ်သည် ဓါတ်တော်မကြွင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဈာန် အဘိညာဉ်ဆိုသော မြေလျှိုးမိုးပျံမရှိပါက ရဟန္တာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောဆိုခဲ့လျှင် အရိယူဝါဒကံ ထိုက်သွားသည်ဖြစ်၍ ၀ိပဿာနာအားထုတ်သော်လည်း မဂ်ဖိုလ်မရတော့သည်ကို အထူးသတိပြုအပ်ပါသည်။
အညွှန်း – လူငယ်များအတွက် ဂမ္ဘီရ၀ိပဿနာအတွဲ ၁နှင့် ၂ စာအုပ်။
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← မဂ်ဖိုလ်ရသင့်လျက် မရခြင်းအကြောင်း